नेकपामा मध्यमार्गी उपाय : सरकार चलाउन पार्टीमा उच्चस्तरीय संयन्त्र !
पार्टीभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधानका विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र मध्यमार्गी उपायहरूको चर्चा हुन थालेको छ ।
जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने क्रम बुधवार पनि नरोकिएपछि अध्यक्षसमेत रहेका ओली केही हच्केको महसूस स्थायी कमिटी सदस्यहरूले गरेका छन् ।
बुधवारको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने ५ मध्ये २ जनाले मुख फोरेरै ओलीको राजीनामा मागे भने अन्य २ जनाले पनि सरकारको आलोचना गर्दै घुमाउरो भाषामा राजीनामालाई नै विकल्पको रूपमा अघि सारे ।
मंगलवारको बैठकमा बोल्ने १८ मध्ये अधिकांश वक्ताहरूले पनि ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।
बुधवार स्थायी कमिटी बैठक शुरू हुनुअघि बालुवाटार पुगेका केही मन्त्री र ओलीनिकट नेताहरूले बैठकमा उठेका कुरा धैर्य भएर सुन्न सुझाव दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार बुधवार बिहानको छलफलमा ओली अलि नरम भएर प्रस्तुत भएका थिए ।
'ल भन्नुस् न त म के गरूँ' भन्ने शैलीमा ओली प्रस्तुत भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
जवाफमा नेताहरूले मध्यमार्गी बाटो खोजिने र कसैलाई पनि अपमान नहुने ढंगले बैठकको समापन हुने आश्वासन दिएका थिए ।
'पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग र आवश्यक परे सचिवालय बैठक बोलाएर भएपनि आफ्नो भनाइ स्पष्ट राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,' छलफलमा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले स्थायी कमिटी बैठकले कसैको पनि अपमान नहुने गरेर निकास निकाल्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्‍यौं ।'
ओली एकपटक अध्यक्ष प्रचण्डसँग गहन छलफल गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । 'सम्भवतः बुधवार साँझ नै अध्यक्षद्वयबीच गम्भीर कुराकानी हुनेछ,' नेकपा उच्चस्रोतको दाबी छ ।
ओलीलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाउँदा या बैठकबाट निर्णय नै गरेर हटाउने प्रक्रियामा जाँदा प्रधानमन्त्रीले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने र त्यसले पार्टी र देशको भविष्य नै खतरामा पर्ने सक्ने विषयमा खुमलटार जानकार छ ।
बुधवार प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरूलाई खुमलटार बोलाएर यही विषयमा छलफल गरेका थिए ।
ओली सेरेमोनियल अध्यक्ष !
ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन विधान नै संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आवश्यक रहन्छ । स्थायी कमिटी बैठकबाट ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने भन्दा पनि 'सेरेमोनियल' अध्यक्ष बनाउने र त्यहीअनुसार निर्णय गराउन सकिने खुमलटारको हिसाबकिताब छ ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पनि त्यति सजिलो नरहेको नेताहरूको बुझाइ छ । सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गर्ने गरेको आरोप लागेका ओलीलाई पार्टीकै नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्षमा प्रचण्ड-माधव पुगेका छन् ।
उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माणको बहस !
सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माणको विषय बाहिर बहसमा आइसकेको छैन । तर बुधवारको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै योगेश भट्टराईले संयन्त्र बनाएर सरकार चलाउन सकिने संकेत गरेका थिए ।
भट्टराईले सचिवालयको विकल्प स्थायी कमिटी नभएको भन्दै सकेसम्म शीर्ष नेताहरूबीच नै विवाद समाधान हुनुपर्ने बताए । 'विवाद समाधानका लागि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ,' भट्टराईको भनाइ उदृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरलाई भने ।
प्रचण्डको 'उच्चस्तरीय संयन्त्र'सँग विशेष लगाव छ । उनले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागिसमेत सर्वदलीय संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले त्यसको ठाडै विरोध गरे र बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएपछि प्रचण्ड पछि हटेका थिए ।
यसअघि पनि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि सरकार सञ्चालनका लागि सरकारमा संलग्न राजनैतिक दलहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रले सरकारलाई पार्टीप्रति उत्तरदायी बनाउने र क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । खुमलटारनिकट स्रोत भन्छ, 'स्थायी कमिटी बैठकमा एजेण्डाहरूमाथिको छलफलपछि प्रचण्ड-नेपालको तर्फबाट यो प्रस्ताव आउन सक्छ ।'
प्रचण्डले पनि बुधवार बिहान आफ्नै निवासमा नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए ।
‘समाधान नै नहुने भन्ने हुन्न, सरकार सञ्चालनका लागि संयन्त्र बनाउने र प्रचण्डलाई व्यावहारिक रूपमा नै कार्यकारी अधिकार दिने गरी समाधान निस्कन सक्छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
राजीनामा मागको शृंखला !
मंगलवारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत अधिकांशले ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए ।
बुधवार पनि ओलीको राजीनामा माग्ने क्रम रोकिएन ।
मंगलवारको बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले संस्थागत रूपमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको पहिलोपटक भएको बताए ।
'संस्थागत रूपमै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले असन्तुष्टि पोखेपछि एउटा निकास त निस्कनै पर्छ,' पौडेलले भने ।
मंगलवारको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्षबीच छलफल हुने र आवश्यक परे सचिवालयको बैठक बस्ने बताएका थिए ।
सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न नदिन पनि संयन्त्र आवश्यक रहेको प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
‘अहिलेको विवादको चुरो पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने हो । संयन्त्र बन्यो भने सरकार यसरी स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन,’ उनले भने ।
नेकपा टर्बुलेन्समा फँसेको हो, दुर्घटना हुँदैन - विश्लेषक झा
यसैबीच नेपाल चीन मामिलाका जानकार एवं स्वतन्त्र विश्लेषक प्रा. डा. राजीव झाले नेकपामा हाल देखिएको विवाद दुर्घटना उन्मुख नरहेको आफूले बुझेको बताएका छन् ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'दुई पाइलटले चलाएको नेकपा रुपी जेट अहिले आकाशमा हावाहुरी र बाक्लो बादलका कारण टर्बुलेन्स (जहाज बेस्सरी हल्लिने अवस्था)मा फँसेको मात्र हो । यो दुर्घटनामा परिहाल्दैन । नेताहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय गर्नेमा म विश्वस्त छु ।'
'जब जहाज टर्बुलेन्समा फँस्छ, त्यतिबेलै पाइलटहरूको वास्तविक कुशलता र क्षमताको परीक्षण हुने हो,' उनले थपे, 'नेकपाका दुई अध्यक्षले यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि परिपक्व निर्णय लिनुहुनेछ र नेकपाको दुर्घटना टर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासल...
ओलीमाथि थप ‘कारबाही’ को तयारीमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष...
बहस सकाउन खोजेपछि एमिकस क्युरीबाट गीता पाठकको ‘अ...
भारतमा उत्पादित कोरोना खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्...